Ukuprinta kunye nokudaya
Ukuprinta kunye noMabala
Ukudaya kunye nokuhlamba
Ezikhethekileyo Pad bokudaya kunye Machine Continuous
Iindaba kunye neTrends
Ukusetyenziswa kweearhente ze-antistatic kudlala indima ebalulekileyo emsebenzini nakubomi
ngomphathi ku 21-10-19
Zininzi iingozi ezivela kumbane ongashukumiyo. Enye ingozi ebalulekileyo ivela ekusebenzisaneni kwezinto ezihlawulisiweyo. Xa umzimba wenqwelomoya uhlikihla amasuntswana afana nomoya, ukufuma, uthuli, njl., Inqwelomoya iya kuhlawuliswa. Ukuba akukho manyathelo athathwayo, iya kuphazamisa kakhulu i-aircraf ...
Cationic modifier yokusebenza kunye nendlela yokusetyenziswa
ngomphathi ku 21-10-12
Iinguqulelo zeCationic zizinto ezinobumbano olusebenzayo lobunye. Zisetyenziselwa ikakhulu ukudaya iingubo zokwaleka kwemisonto yeselulosi enje ngomqhaphu, ilinen kunye nerayon, kunye nokudaya ngedayi esebenzayo kunye ngqo kwiibhafu enye. ukusebenza: Inkangeleko: ulwelo emdaka Ionicity: cati ...
Isisombululo yi-1% -10%, yongeza i-textile dispersant for use
ngomphathi ku 21-09-29
1.Anti-acid, anti-alkali, ukuxhathisa kwamanzi, ukomelela kwamanzi; 2. Inokungena okuhle, ukulinganisa, ukumanzana nokusasazeka; 3. Thintela iziphumo zeentyatyambo ezinemibala, amabala, ukudaya iintyatyambo, njl .; 4. Ukuphucula ukutyibilika, ukusasazeka kunye nokuncamatheliswa kweglu, izinto zokuncamathelisa, ukuhombisa ...
Yintoni ipetroli yendwangu? Ulwazi lwedayi yezixhobo
ngomphathi ku 21-09-25
Yintoni ipetroli yendwangu? Ulwazi ngedayi yamalaphu. Iidayi zelaphu ziidayi ezisetyenziselwa ukudaya kwamalaphu. Zizona zicatshulwa zezityalo ezifana neziqhamo zezityalo kunye nencindi yomthi. Zinezinto zemichiza yendalo ezinjenge tar yamalahle. Ukwahlulahlulwa kwiidayi zendalo kunye nedayi yokwenziwa, uninzi lwazo ...
Intshayelelo kuhlelo kunye neempawu zokuthamba
ngomphathi ku 21-09-14
Isoftener luhlobo lwento yemichiza enokutshintsha ukungqinelani kunye nokuqina kokungavisisani komlingani wefayibha. Inokuthi ifakwe kumgangatho wefayibha eyolukiweyo kwaye yenze ifayibha igude, ukuze utshintshe ukuziva kwesandla kwaye wenze imveliso ikhululeke ngakumbi. Ukuze ndikunike ii-unders ezingcono ...
Iyintoni indima yokulungisa iarhente kumalaphu?
Ukulungisa iarhente kunokuphucula ukukhawuleza kombala wedayi kwilaphu njengearhente encedisayo esetyenziselwa unyango olumanzi. Inokwenza izinto ezinombala ezingenakunyibilika ngedayi kwilaphu ukuphucula ukuhlamba kunye nokubila ukukhawuleza kombala, kwaye ngamanye amaxesha kunokuphucula ukukhawuleza ukukhanya. ...
Iindidi ezintathu zezinto ezichasayo
ngomphathi ku 21-08-30
1. Iarhente yeAntistatic Indlela yearhente ye-antistatic kukudala ifilimu yamanzi kumphezulu wemveliso ngokufakwa kwintengiso (adsorption) ukuthintela ukwakheka kunye nokuqokelelana kombane ongashukumiyo. Ke ngoko, ukusebenza kwe-antistatic ye-antistatic agent kuxhomekeke kubuchule be-antistatic ag ...
Umahluko phakathi kwefilimu kunye neoyile yesilic kunye neoyile ethambileyo
ngomphathi ku 21-08-23
Umahluko phakathi kwefilimu kunye neoyile yesilic kunye neoyile ethambileyo: 1. Ioyile yesilicone: Umphumo wokugudisa ioyile yesilicone ungcono. Owona mqobo mkhulu kukuba kuyabiza kwaye kuyabiza, kwaye kulula ukwenza ioyile edadayo xa isetyenzisiwe. Ukuphendula kule ngxaki, ioyile ye-ternary copolymer silicone iye ...
Ukuthabathe ukuze uqonde kwaye uwamkele deodorant
Ukuza kuthi ga ngoku, abantu bahlalutye izinto ezinamachiza amabi, kunye nezinto ezineesulphur, iialdehydes, iiasidi ezinamafutha asezantsi, kunye neeamine ezahlukeneyo zonke zichaziwe njengezinto ezinukayo. I-malodors ezahlukeneyo zinamacandelo amabi ahlukeneyo, kwaye kwezi malodors, ezaziwayo zivela kwi-relati ...
Owona msebenzi uphambili wearhente yokulinganisa
Umsebenzi ophambili wokwaleka kukuhombisa kunye nokukhusela. Ukuba kukho ukuhamba kunye neziphene zokulinganisa, ayizukuchaphazela inkangeleko kuphela, kodwa iya konakalisa nomsebenzi wokhuseleko. Umzekelo, ukuyilwa kwemingxunya yokuncipha kubangela ukungalingani kwefilimu yepeyinti, kunye nokwenziwa kwephin ...
Zeziphi izinto ezenziwayo kunye neempawu ezifika ngexesha elifanelekileyo kwiiarhente zokususa ukufuma
I-DMA ilungele ukugqitywa okuthambileyo kweempahla zodidi oluphezulu. Ingasetyenziselwa ukugqitywa kwe-hydrophilic kunye nokuthamba kwe-polyester-umqhaphu, ilaphu le-polyester emsulwa, amalaphu enziwe ngumntu, amalaphu ahlukeneyo kunye namalaphu alukiweyo. Inokwenza ilaphu libe nokuhlala ixesha elide kunye nokuhlamba ...
Ungakuphucula njani ukuKhawuleza kombala wokuLungisa iArhente ngokudaya ngokuthe ngqo
1. Iidayi eziqhelekileyo ezingathanga ngqo (ezifana ne-NB eluhlaza emnyama, i-NM emdaka, njl njl. endaweni yoko. 2.Idayi engangqalanga edibeneyo (D), ayikwazi ukwenza idayi kuphela T / C, T / R kunye nezinye izinto ezihlanganisiweyo ...